दुबई एयरपोर्टमा अलपत्र नेपाली लिन नेपालबाट जहाज उड्यो, दुबई एयरपोर्टमा खुशीयाली (भिडियो सहित)
August 23, 2020 834
चार्टर्ड उडान रोकिएपछि दुबई विमा’नस्थलमा अड्किएका नेपाललीलाई लिन नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी ए–३३० जहाज त्यसतर्फ उडेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ’लबाट केहीबे’रअघि दुबई उडेको निगमको जहाज दिउँसो ४ः१५ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका छ । दुबईबाट २६० भन्दा बढी यात्रु लिएर वाइ’डबडी जहाज साँझ काठमाडौँ आइपुग्ने निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानका’री दिनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राल’यको स्वीकृतिमा निगमले काठमाडौँ–दुबईका लागि रद्द उद्धार उडान सञ्चालन गरेको हो । निगमको गत १८ अगष्ट’का लागि दुबईबाट काठमाडौँ’का लागि तय गरिएको उडान यात्रुलाई का’ठमाडौँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नभएको भन्दै सरकारले स्थगन गरेको थियो ।
उक्त दिन दुबईबाट काठमाडौँ उडा’नका लागि टिकट लिइसकेका यात्रुका लागि आज उडान गरि’एको निगमले जनाएको छ । त्यस दिन काठमाडौँबाट २३५ यात्रु तथा १५ टन कार्गो लिए’र गएको निगमको वाइडबडी जहाज दुबईबाट रित्तै काठ’माडौँ फर्किएको थियो ।
जहाज रित्तै फर्केपछि सम्बन्धित नि’कायको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उडानका लागि दुबई विमानस्थलमा तयारी अवस्थामा रहेका यात्रु अलपत्र परेका थिए । हालै’को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिष’द्को यही बिहीबार बसेको बैठकले भदौ १६ देखि निश्चित शर्तसहि’त नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि सरकारले पिसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुबाट शर्तस’हितको नियमित उडान गर्ने र त्यस्तो उडान दैनिक ५०० यात्रु नकट्ने गरी उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । त्यस प्रयोज’नका निम्ति संस्कृ’ति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालल’यलाई उडान तालिका बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारी निर्णयानुसार पिसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरु मलेशिया, युएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जा’पान, चीन, हङ्कङ, अष्ट्रलिया, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपा’ली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोग’का कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’का कर्मचारीलगायतलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गरिनेछ ।
बैठकले पिसीआर स’हज नभएका मुलु’कहरु कतार, साउदी अरब र कुवेतलगायत अन्य मुलुकबाट नियमित उडानमार्फत यात्रु ल्याउन नपाइने निर्णय गरेको छ । नियमित उडा’नका लागि उडान अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनी’तिक नियोगबाट सिफारिस भएको नामावली बमोजि’मका यात्रुका लागि चार्टर्ड उडान गरिनेछ ।
यसरी आउने यात्रुको ७२ घण्टा’भित्र पिसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने जनाइएको छ । विदेशबाट आउ’ने यात्रु काठमाडौँमा आएपछि सात दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ ।
विमानस्थलका महाप्रब’न्धक देवेन्द्र केसीका अनु’सार आज विभिन्न मुलुकबाट नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन चार अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैछन् । नेपाल एयरलाइन्सको दुबई र हिमा’लय एयर’लाइन्सको चीनको कुनमिङमा दुई उडान हुनेछ ।
हिमालयका दुवै जहाज राति गन्तव्य’तर्फ उड्ने विमान’स्थलले जनाएको छ । आजै भोल्गा ड्नेपर एयर’लाइन्स नागपुरबाट काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ । उक्त एयरला’इन्सको जहाज बिहान १०ः१५ बजे कामाडौँ आएर आजै दिउँसो ३ः१५ बजे फर्किने तालि’का रहेको छ ।
Prevज्योति मगरले ‘ऋषि धमलाजस्तै पोईको खोजीमा छु’ भनेपछि…(भिडियो सहित)
Nextभदौ १६ गतेबाट कुन-कुन देशमा नियमित उडान हुँदैछ ? हेर्नुहोस संपूर्ण जानकारी
घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पर्छ ? हेर्नुहोस्
७ वर्षिय वालिका कोरोनालाई जितेर घर फर्किदा, देखियो यस्तो दृष्य (भिडियोसहित)
‘मेरी बास्सै’मा भाइरल सचिन परियारको इन्ट्री ,भिडियो बन्यो भाइ-रल (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136449)